ကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းကိုရှေးခယျြဖို့ကိုဘယ်လို - အရင်ကဆိုရင်များအတွက် - 2019
ယနေ့ရုံးသို့မဟုတ်အိမျတျောကိုလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲအတွက်အိမ်မှာကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းဖျော်ဖြေအမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကမာစတာအတော်လေးဝယ်လိုအားနှင့်ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပင်ရုရှားနိုင်ငံတွင်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့မြို့ရွာ၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး: ကွန်ပျူတာမကြာခဏတစ်ခုတည်းမိတ္တူအတွက်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နီးပါးတိုင်းမိသားစုထဲမှာ။ ကျနော်တို့ကကုမ္ပဏီရုံးခန်းအကြောင်းပြောဆိုပါလျှင်ကွန်ပျူတာများမပြုဘဲ, ဤဥပစာကိုတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ဆက်စပ်ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများတစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပျက်ကွက် - တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်အခြားဘာမျှသုံးပြီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာအကူအညီ၏ဝန်ဆောင်မှု၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အနုပညာရှင်၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုရှိနေသော်လည်းဤရွေးချယ်မှုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မာစတာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလုပ်၏ရလဒ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်အရည်အသွေးသို့မဟုတ်စျေးနှုန်း။ ငါကရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်အတွက်သင်ပြောပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ပြီးခဲ့သည့်4နှစ်တာကာလအတွင်းကျနော်ပညာရှင်ပီသစွာအဆိုပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများတွင်ကွန်ပျူတာများ၏အဖြစ်နေအိမ်တစ်ဦးချင်းစီမှာကွန်ပျူတာအကူအညီများ၏ပြဌာန်းချက်အတွက်စေ့စပ်ပြီ။ ဤအချိန်အတောအတွင်းဒီလိုန်ဆောင်မှုများပေး4ကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထဲကနှစ်ယောက်ကအခြားနှစ်ဦးကို "ကောင်းသော" ဟုခေါ်နိုင်ပါသည် - က "မကောင်းတဲ့" ။ လောလောဆယ်ငါတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လက်ရှိအတှေ့အကွုံသူတို့ကိုခွဲခြားဖို့နဲ့အရာများ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဖွဲ့အစည်းများအချို့ဆိုင်းဘုတ်များဆင်နွှဲဖို့အချို့သောအတိုင်းအတာအထိငါ့ကိုခွင့်ပြု, client ကိုစိတ်ပျက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူဤသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် site ပေါ်တွင်ငါကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများရှိကွန်ပျူတာများ၏ပြုပြင်အတွက်စေ့စပ်ကုမ္ပဏီတွေတစ်ကက်တလောက်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အမည်ပျက်စာရင်းကွန်ပျူတာအကူအညီကုမ္ပဏီများမှတည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အဘယ်သူသည်အဘယ်မှာရှိ wizard ကိုတွေ့ပါမှ, မခေါ်သင့်တယ်
ကွန်ပျူတာ-ဟာ executable ပြုပြင်စောင့်ကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကွန်ပျူတာအဖြစ်ကောင်းစွာနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ, သင်အများဆုံးလိုအပ်မယ့်အခါ, ဒီများအတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ရုတ်တရက်ဖြိုဖျက်နှင့်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် - မနက်ဖြန်သင်ခန်းစာ, ဒါမှမဟုတ်အကောင့်ကို ယူ. , အီးမေးလ်အတွက်မဆိုတစ်မိနစ်လာရမညျ အရေးအပါဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျများ, etc နှင့်အညီ, ရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့ပိုကောင်းယခုအလွန်အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူကူညီပေးသည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်အဖြစ်နှင့်ပုံနှိပ်မီဒီယာများတွင်အဖြစ်သင့်ရဲ့မြို့ကြော်ငြာမျက်နှာပြင်များအတွက်ရရှိနိုင်သမျှသောသင်ကျိန်းသေအခမဲ့ခရီးသွားနှင့် 100 ရူဘယ်ထဲကနေအလုပျ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်ကွန်ပျူတာများ၏အရေးပေါ်ပြုပြင်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာမြင်လိမ့်မည်။ ကြှနျတေျာ့န်ဆောင်မှုများ၏စျေးနှုန်း0င်ရူဘယ်ဖြစ်ပါသည် - ရောဂါအပြင်မသို့မဟုတ်ပင်သူမမပြည့်စုံကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါငါတကယ်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖောက်သည်သွားရောက်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, နှင့်။ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ $ 100 ကွန်ပျူတာများပြုပြင်ကြဘူးနဲ့ကျွန်မအဘယ်သူမျှမပြုပြင်သည်ကိုသင်တို့သိကြပါ။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်တို့အားငါမြောက်မြားစွာကြော်ငြာများအတွက်မြင်ပြီးသားကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာခဲ့ကြသူမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများကဖုန်းဆက်ပါလိမ့်မည်သည့်မှားဖုန်းနံပါတ်, dial ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သူတို့ကသူ့အလုပ်သိတယ်ကာလုံလောက်သောစျေးနှုန်းကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့သူကိုကောင်းသောမာစတာသင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး, ကမဆိုအမှု၌မလိုအပ်ပါဘူးရှိရာသွားကြဖို့အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ က "မကောင်းတဲ့" ကုမ္ပဏီများနှင့်အနုပညာရှင်များ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုကဒီတစ်အမြဲတမ်းဖောက်သည်စေရန်ပြဿနာများ၏ရေးဆွဲရေးမပါဘဲပြဿနာကွန်ပျူတာကိုတဦးတည်းဖောက်သည်ထံမှတစ်အချိန်အမြတ်အများဆုံးအမြတ်အစွန်း၏အာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, repairmen ငှားရမ်းနဲ့ PC ကို configure လုပ်တဲ့အခါ, တိုက်ရိုက်ဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်းဟာအထူးကုဖောက်သည်ကိုအားသွင်းမည်ကိုပမာဏအပေါ်တိုက်ရိုက်မူတည်စေခြင်းငှါအရာ, ဒါကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဟုကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများထောက်ခံမှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏နံပါတ်။ ဤသည်ကိုလည်းအဲဒီကုမ္ပဏီတွေကအမြဲအင်ဂျင်နီယာများပြုပြင်အလုပ်တစ်ခုရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည် - လူတိုင်းမအလုပ်ကဒီစတိုင် likes ။
သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမည်သူမဆိုရန်သင့်အားအကြံပြုနိုင်မဟုတျပါလျှင်, သူကကြော်ငြာတွေကိုပဌနာဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းနှင့် wizard ကိုဖန်ဆင်းအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု၏ဒီဂရီ၏ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းများများ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ငါငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသတိပြုမိသည်။ ကဆက်ပြောပါတယ် "ကောင်းသော" နှင့် polpolosy ပေါ်တွင်သတင်းစာများတွင်အရောင်ကြော်ငြာတွေအတွက်အညီအမျှမကြာခဏဖြစ်ကြပြီးလေဆာပရင်တာပေါ်ပုံနှိပ် "မကောင်းတဲ့" A5 အရွယ်အစားစာရွက်များသည်သင်၏မုတ်တံခါးအပေါ်ဆွဲထား။
ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာ၏အကူအညီရှာကြံ၏အကြံပေးနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောကောက်ချက်ကဒီအဆိုပြုချက်ကိုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းစကားပြောဆိုမှုအပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, သငျသညျထိုပြဿနာကိုမဆိုအတိအကျဖော်ပြချက်ဖုန်းပေါ်မှာကွန်ပျူတာပြဿနာများကိုအတူပျေါထှနျးထားပါတယ်ပေးနိုင်လျှင် - ကမပြုပြင်များ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေစစ်ဆေးပါ။ အားလုံးကတော့, ဒါပေမယ့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါကစျေးနှုန်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုများပေး A ကောင်းဆုံးမာစတာ
သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖုန်းခေါ်ပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျဗိုင်းရပ်စ် delete သို့မဟုတ် Windows ကို reinstall ချင်ကြောင်းသိစေလျှင်ဥပမာ, ငါစျေးနှုန်း၏အောက်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်းကန့်သတ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ရှက်တိုင်းလမ်းရဲ့အဆုံးမှာကွာတိုက်ရိုက်အဖြေကနေပါလျှင်, တစ်ဖန်ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစား "500 ရူဘယ်ထဲကနေ Windows ကို installation ကို" သာသညျကား, ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု: "ငါသည်သခင်ကိုပဌနာလျှင်မှန်ကန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ပါနဲ့, အ hard disk ကို format (သို့မဟုတ် data ကိုစွန့်ခွာမည်သည့် ), Windows 8 နဲ့ကအားလုံးကို drivers တွေကို install လုပ်, ပြီးရင်ငါ 500 ရူဘယ်ပေးဆောင်ကြမည်နည်း "။
သင် hard disk ကို format နဲ့နှင့်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ကြောင်းပြောပါလျှင် - သီးခြားဝန်ဆောင်မှု (စျေးနှုန်းစာရွက်ပေါ်နှင့်စျေးနှုန်းစာရင်းမှာကြည့်ပြောပါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်စျေးနှုန်းများ), နဲ့ Windows ၏ installation များအပြင်၌သင်တို့လည်းလည်း operating system ကို configure ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆိုသည်ကား, ကပါဝင်ပတ်သက်ရဖို့မ သာ. ကောင်း၏။ သော်လည်းအများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင်မပြောကြဘူး - "မကောင်းတဲ့" စျေးနှုန်းကိုခေါ်နီးပါးဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ အခြားပမာဏကိုအမည်ကိုနိုင်သူကျွမ်းကျင်သူများ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးက၎င်း၏ကန့်သတ်, ဆိုလိုသည်မှာအကြံပြု Call 500 1500 မှရူဘယ်ထဲကနေ - ဒီ, ငါ့ကိုယုံကြည်ပါက "300 ရူဘယ်" ထက်အများကြီးပိုကောင်းသည်နှင့်အသေးစိတျကိုသတ်မှတ်ငြင်းဆန်။
ငါ့ကိုသငျသညျကိုအနည်းဆုံးသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူဖြစ်ပျက်အကြောင်းကိုသိကြသည့်အခါအထက်ပါအပေါငျးတို့သမှသာအမှုနှင့်သက်ဆိုင်သငျသညျသတိပေးကြစို့။ ထိုအလျှင်သည်မဟုတ်လော ဤအခြေအနေ၌, သငျသညျအသေးစိတျကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖုန်းပေါ်မှာလူများတို့သည်သခင်ကိုပဌနာ, သင်မှပုံမှန်သလိုပဲ, သူတို့ကရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းလျှင်ထွက်ဖြစ်လေသည်။ ဒါဟာတခြားဘာမှအကြံပြုဖို့ခက်ခဲသည်။
ပဲအားလုံးသတ်မှတ်ထားသောအကျင့်ကိုကျင့်တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့် - သင်ကစျေးနှုန်းအပေါ်သဘောတူညီခဲ့ဖူးနှင့်သင်လိုအပ်သည့်တိကျသောန်ဆောင်မှုအဘယ်အရာသည်ဆိုပါဒီတော့ကျွန်မကွန်ပျူတာအကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်သူများ၏ပြဿနာသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးမှရောက်ရှိလေ့လာ ... ။ အဘယ်သူမျှမထိခိုက်ကိုလည်းန်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ငွေပေးချေဆန့်ကျင်ဖြစ်သို့မဟုတ်မဆိုမမြင်နိုင်တဲ့အပိုဆောင်းပေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်ရှိမရှိ, တစ်ဦးအထူးကုနှင့်အတူစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှင့်အညီနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါစေ။
ကြိုတင်မဲအတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူပြဿနာများ၏အနှစ်သာရသည်သင်မသိခဲ့လျှင်, ထို့နောက်သူကပြုပါရန်နှင့်ကကုန်ကျမည်ဘယ်လောက်သွားခဲ့ Pre-ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ပြတ်ရွေ့ရောဂါအပြီးကျွမ်းကျင်ဖို့သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ "ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်" ကိုဖွစျလိမျ့မညျအနှစ်သာရရာမဆိုအဖြေကို, ဒါကြောင့်စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မည်သည့်အခါအချိန်သင့်ရဲ့စိတ်ရင်းအံ့အားသင့်ရဲ့အဆုံးတစ် harbinger ဖြစ်လာနိုင်မီကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းများ၏ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းအမည်ကိုဖို့တွန့်ဆုတ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ကကျွမ်းကျင်ပိုင်, အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် repairmen နှင့် configure လုပ်ပြီး PC များစေပြီလိမျ့မညျသည်အဘယ်အရာကိုကြိုတင်သိရန်ခက်ခဲသည်။ အလားတူကုမ္ပဏီလုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ပဲအများကြီးသေးသင်ယူနေသောကလေးငယ်များ upscaling လိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, မပင်အရှိဆုံး "အေး" အထူးကုတစ်ဦးသို့သတင်းအချက်အလက် (လိမ်လည်မှုမှဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်) နှင့်တက်ကြွရောင်းအားကိုသိုထားသော, ကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းများတွင်စူပါအထူးကုထက်လျော့နည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ရှေးခယျြမှုသိသာမဟုတ်ပါဘူးအခါ, ကပထမဦးဆုံးလိမ်လည်မှုကိုပယ်ဖြတ်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်: 17 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်, Window ပြန်လည်အားဖြင့်ကွန်ပျူတာနှင့်မဆိုပြဿနာဖြေရှင်းနိုင် (ဆိုလိုသည်မှာမဟုတ်အရှိဆုံးအကောင်းဆုံးလမ်း, ဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်) သို့မဟုတ်မည်သည့်ပြဿနာများ၏စစ်မှန်သောအကြောင်းမရှိရှာဖွေရေးမှာတားဆီးမရှိ ဒါဟာ semi-လစဉ်လစာမပါဘဲသငျသညျအရွက်။ အဘယ်သူ၏ရည်မှန်းချက်မှာ "မုန့်စိမ်းကိုခုတ်" ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကုမ္ပဏီ, ပင်ကောင်းတစ်ဦး wizard ကိုအောက်ပါအပိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့, အလုပ်အများဆုံး suboptimal ထုံးစံပြုလိမ့်မည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် 10 တထောင်ပေးဆောင်ဖို့ကိုဘယ်လို
ငါကပထမဦးစွာကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းမရှိကျင်းပသည့်အခါ, အနာဂတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ချိန်ကငါအလုပ်၏အဆုံးအထိစျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုပြောပြပင်အချို့လက်တွေ့ကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့တယ်ဖို့မကြိုးစားရန်ဖောက်သည်ကိုပိုပြီးအားသွင်းဖို့အမိန့်များနှင့်ငါ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက် 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုပြောသည်။ ငါစျေးနှုန်းစာရင်းထဲတွင်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသော desktop ပေါ်မှာများအတွက် client ကိုအတူနဖူးစည်းစာတမ်းအားဖယ်ရှားသည့်အခါတစ်နေရာဒုတိယနေ့၌, ငါညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူကြာမြင့်စွာစကားပြောခဲ့ရသည်။ "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ကို Windows ကို reinstall, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုဖယ်ရှားမပေးပါဘူး":, စကားလုံးများအတွက်စကားလုံးသတိရပါ။ ငါသည်အလျင်အမြန်ငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျန်ရစ်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာထွက်လှည့်အဖြစ်အလွန်အမှုအရာလုပ်နေတာ၏ဤလမ်းအလွန်ပုံမှန်နဲ့ကျွန်မမတိုင်မီထင်သကဲ့သို့, သာမန်ထဲကတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။
Perm ကနေလက်ခံမှုကိုလက်မှတ်ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီကောင်းသော။ ဒါကကြော်ငြာသည်မဟုတ်, သူတို့သည်သင့်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပါ။
ရဲ့, သင်သည်ငါ၏အအကြံပြုချက်များမဆိုနားထောင်ရန်တိတ်တဆိတ်က၎င်း၏အလုပ်မရသူမာစတာခေါ်နှင့်အဆုံးမှာသငျသညျပြီးစီး၏လက်မှတ်, သငျသညျစိတျဓာတျပေးသောပမာဏလက်မှတ်ထိုးမပေးခဲ့ပါဘူးလို့ပြောကြပါစို့။ သို့သော် wizard ကိုအရာအားလုံးစျေးနှုန်းစာရင်းအရသိရသည်ကွပ်မျက်ခံရသည်နှင့်တောင်းဆိုမှုများမဖွစျနိုငျကွောငျးဖျောပွပါလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားကြည့်ပါ, သင့်ကွန်ပျူတာကနေ malware ကိုဖယ်ရှားခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ရှိနိုငျသောအနေဖြင့်: (အားလုံးစျေးနှုန်းများအနီးစပ်ဆုံးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကယ့်အတွေ့အကြုံကနေယူ, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမော်စကိုစျေးနှုန်းများအဘို့မသာပိုမိုမြင့်မားနေကြသည် .. )
မာစတာကဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဖယ်ရှားမရနိုငျနှင့်ဖယ်ရှားလျှင်, သာနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုဆိုးရွားရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ သငျသညျကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်စနစ် Re-install လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှ;
သူမဆို user data ကိုကယ်ဖို့လိုအပ်ရှိမရှိမေးတယ်;
သငျသညျလိုလျှင် - 500 ဒေတာချွေတာဘို့ရူဘယ်, ဒါမှမဟုတ် - ကွန်ပျူတာ၏ hard disk ကို format လုပ်ဘို့တာ;
BIOS ကို Setup ကို (သင်က Windows ၏ installation စတင်နိုင်ရန်တစ်ဦး bootable CD သို့မဟုတ် USB မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်) - 500 ရူဘယ်,
Windows ကို Install လုပ်ခြင်း - 500 1000 မှရူဘယ်ထဲကနေ။ တခါတရံလည်းပေးဆောင်ဖြစ်သောတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်အချို့ပြင်ဆင်မှု, ခွဲဝေခံရဖို့ဖြစ်ပျက်;
ယာဉ်မောင်းနှင့် OS ကို configuration ကို Installing - ထို setting ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်း 500 များအတွက် 200-300 ရူဘယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါသညျဤရေးသားခြင်းငါပေးသောများအတွက်လက်ပ်တော့, ယာဉ်မောင်းကို install ၏ကုန်ကျစရိတ် 1500 ရူဘယ်, မာစတာ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းပေါ်မှာကောက်အားလုံးထံမှပါပြီလိုရှိ၏
သင်ပြုဖို့ဘယ်လိုမသိကြပါလျှင်, အင်တာနက်ချိန်ညှိခြင်း - 300 ရူဘယ်,
ထိုပြဿနာမှ updated ခြေစွပ်ကောင်းတစ်ဦး antivirus ကို Install သူ့ဟာသူပြန်လုပ်ပါဘူး - 500 ရူဘယ်,
အထက်ပေါင်း 500 - အပိုဆောင်းလိုအပ်တဲ့ software ကို (စာရင်းသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်စေခြင်းငှါ, မူတည်မပြုစေခြင်းငှါ) ၏ installation ။
ဒီနေရာတွင်သတိထားပါမပြုစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားအောင်မြင်စွာပြန်ဆိုခဲ့ကြရသောအကြောင်းကိုအများဆုံးဖွယ်ရှိန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူယင်းသို့အနည်းငယ်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းကိုရောက်စေဖို့ 5000 ရူဘယ်၏ဒေသတွင်း၌တစ်စုံတစ်ခုရ။ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်, အထူးသဖြင့်မြို့တော်အတွက်စျေးနှုန်းအများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ အားလုံးအများစုဟာ, ကိုယ့်န်ဆောင်မှုများ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုအတူတက်လာကုမ္ပဏီ၏ချဉ်းကပ်နှင့်အတူအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာများ၏ပြုပြင်အများအပြားပါဝင်ပတ်သက်, ထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံများဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျ, "ကောင်းသော" ၏အမျိုးအစားကနေကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ထို client ကိုအတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပိုနှစ်သက်ရာနှင့်ကြိုတင်စျေးနှုန်းမခေါ်ဝံ့ဘူးဆိုရငျ, ရုရှမြို့ကြီးများ၏အများစုများအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်န်ဆောင်မှုများဖယ်ရှားပစ်ရန်အားလုံးလိုအပ်သော၏ကုန်ကျစရိတ် 500 ကနေ 1000 ရူဘယ်အထိပါလိမ့်မယ်။ ခန့်ထက်နှစ်ဆလောက်မော်စကိုနှင့် St. ပီတာစဘတ်သည်။ ဒီအများကြီးပိုကောင်းကျနော့်အမြင်ရှိ။
မော်စကို> ကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်း - ဆုကြေးငွေပစ္စည်း
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်းနေချိန်မှာငါပြုပြင်နှင့်သင့် PC ကိုစာပြီအဖြစ်ကိုလည်းသည်လည်းဖြစ်သောမော်စကိုကနေသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူအထက်ပါခေါင်းစဉ်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်မေးတယ်။ Skype ကိုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏စာပေးစာယူအတော်လေးသိကောင်းစရာများ:
မော်စကို: အခေါ်ဆိုသူ၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီယာဉ်မောင်းများအတွက် Windows ကို 1500R နှင့် 500r ကို install လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကကုန်သည် 3000r ဖြစ်ပြီး, ကုမ္ပဏီ ** အားလုံးအကြောင်းကို 12-20tysyach evayut အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖု 1000 ဘို့လုပ်နေတာရှိရာစျေးကွက်) မှာရှိတယ်)) ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေကြောင်းရှင်းပါတယ် razvodily)
မော်စကို: Router ကိုထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်ငါ၏အ 1000r အခြားသူတွေအပေါ်အနည်းငယ်မြင့်မား
ကို Dmitry: ထိုအခါကထူးဆန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပါသည်: စျေးနှုန်းအွန်လိုင်းက Windows installation ကိုအများအပြား MSc 500 p ဒါမှမဟုတ်အနီးပါရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မော်စကိုအစစ်အမှန်မဖြစ်ဘို့ထိုသို့ပြုသလော
500r Windows ကို install လုပ်သည့်အခါ screw နှစ်ခုပုံစံ, - - 500 p သင်က Windows ကို install တဲ့အခါမှာ data တွေကိုထိန်းသိမ်း: ကို Dmitry: ငါတစ်ချိန်ကကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်, ဒီရှိ၏။ :)
မော်စကို: ငါပဲသင့်ရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု-500r customize, antivirus ကို-1000r install, ထို setting ကို-1500R (တစ်ယူနစ်) က BIOS ကို-300r, 300r-ချပ်, ကြိုတင်-1000r, installation ကို-500r, 300r-ကားမောင်းသူ setting ပေါ်တွင်စကားလုံးပြောပါလိမ့်မယ်
မော်စကို: ဟုတ် gigabyte နှုန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် 500r ချင်ကြပါဘူး *** ဥပမာ
မော်စကို: ကမ်ဘာပျေါတှငျ *** vshaya ကုမ္ပဏီအများစု
ကို Dmitry: Tolyatti အတွက်ဒါပစ္စုပ္ပန်နှင့်စျေးနှုန်းကို 30 ဖြစ်ပွားမှုရာခိုင်နှုန်းကဖြစ်နိုင်နှင့် schscham get မပြလျှင် :)
မော်စကို: အခုငါပိုပြီးပိုက်ဆံဝင်ငွေရနိုင်ရှိရာ payalku နှင့်စားသုံးသူကိုဝယ်ခြင်းငှါအချို့ပိုက်ဆံတက်ကိုကယ်တင်ချင်တယ်။ payalka 150000r IMHO အကြီးအကျယ်စုဆောင်း)
ကို Dmitry: နှင့်ဆိုက်သာမကြာသေးမီကခဲ့သလဲ ဘယ်လိုအမိန့်ယျသလော အဟောင်းကို clients များသို့မဟုတ်ဒီတော့အဲဒီမှာအတူ?
မော်စကို: ** ကြိမ်မြောက်ပေါ်မှာသူတို့ကမရှိတော့လူများတို့ကိုသည် 10000 ပင်စင်စားအပေါ်ယူလျှင်တဦးတည်းယူ
ကို Dmitry: ဒီတော့ဒီမှာရှိပေမယ့်အနည်းငယ်သာ။ ကောင်းပြီ, ပုံအခြားဖောက်သည်။
မော်စကို: အဘယ်သူမျှမဖောက်သည်စီးပွားရေး, သူတို့ရိုးရှင်းစွာအစပိုင်းတွင်ပျော်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးမသွန်သင်, ငါသည်အကြောင်းကိုကြည့်ရှုလမ်းလျှောက် ** အောက်ဆုံးလိုင်းဖောက်သည်တစ်ဦး sucker ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, စား left! သူမကသူ့ကို 5000r ထက်လျော့နည်းယူလျှင်သင် connect လျှင်သင် 5000r ရန်အလို့ငှာစေလျှင်ပရင်တာ လာ. , သို့မဟုတ်တစ်မြို့ရိုးကို socket plug ကို, ဒဏ်ငွေတစ်ဦးစနစ်တစ်ခုလည်းမရှိသငျသညျ 10000r 40% နှင့် 50% 15000r လျှင်ပယ် 30% ရ goof နှင့် # လုပ်ပါတော့တယ်မှ
မော်စကို: ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ယင်းကဲ့သို့နံနက်စောစောနိုးနဲ့သင်အွန်လိုင်းလုပ်မလုပ်ပါဘူး razvodily ကုမ္ပဏီနှင့်အချို့သော ISP များသည်အကြားသဘောတူညီချက်သည်သင့်ကွန်ပျူတာဆာဗာနှင့်သင့် ip-address ကိုတစ်ဦး multicast တောင်းဆိုချက်ကိုပို့ပေးကြောင်းပြောသည်နေသောပံ့ပိုးပေးမခေါ်ပိတ်ဆို့နေသည်ကသင်တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသည်ကိုဆိုလိုသည်နှင့် သင်မာစတာကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်?))
မော်စကို: ဒါနဲ့) ငါသူတို့မိုက်မဲဖြစ်ကြပြီးကျနော် ubuntu ရှိသည်နှင့်သူတို့ဗိုင်းရပ်စ်အော်ငါ့ကိုပေးသောသူတို့ကိုပြောပြ ***** တဖြည်းဖြည်း၏တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကိုခေါ်
မော်စကို: ငါ 1500P များအတွက်အလံကိုဖယ်ရှားပစ်ပေမယ့်ပြန်လည်အကြံပြုပါသည်။ ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းလိုက်။ ဟုတ်ကဲ့သင်ကရရှိပါသည်)
မော်စကို: အားလုံးကုမ္ပဏီများထံမှ ထွက်. လက်တွေ့အဖွား ယူ. ယခုလူတွေပဲကွန်ပျူတာအသစ်ဝယ်ဖို့
ကို Dmitry: ငါလည်းလို, ဒါကြောင့်သူကို fix လို့မရဘူးဆိုပါကသင်၏လက်, ကောင်းပြီ :) ပွုပါပွီမယ်ဆိုရင်
ဒါကအားလုံးကွန်ပျူတာပြုပြင်ရေးနှင့်ဤရှုပ်ထွေးသောကိစ္စအမျိုးမျိုးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ၏ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပါပဲ။ ငါအချို့လမ်းများတွင်ဤဆောင်းပါးကိုသင်နှင့်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိုအလျှင်သင်ပြီးသားထွက်လှည့်ကြပါပြီ - လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများ, သင်သည်အောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ရာများအတွက်ခလုတ်နှင့်အတူကမျှဝေပါ။